घुस खानेको च्यालेन्ज स्विकार्दै रविको टीम गोरखा, माफि माग्दै फिर्ता गरे,कसले तिर्‍यो रोशनाको बिल ? (हेर्नुहोस भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
घुस खानेको च्यालेन्ज स्विकार्दै रविको टीम गोरखा, माफि माग्दै फिर्ता गरे,कसले तिर्‍यो रोशनाको बिल ? (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
दुई दशक भन्दा बढी अन्ना क्यासिनोमा श्रम गरेकाहरुलाई किन अलपत्र पारियो ?
काठमाडौँ । दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल अन्पूर्णमा रहेको क्यासिनो अन्ना लगानिकर्ताहरुको विवादका कारण बन्द भएपछि करिब १ हजार कर्मचारी ४ बर्षदेखि रोजीरोटीको मागगर्दै आन्दोलनरत छन् ।
२३ वर्षदेखि अन्ना क्यासीनोमा काम गर्दै आएका कर्मचारी देखि ठुलो सँख्यामा कर्मचारीहरुको ४७ महिनाको सञ्चयकोष तथा ७ महिनाको तलब सुविधासहित ३३ करोड र क्यासीनोमा रोजगारी दिन माग गरीरहेका छन् ।
श्रम ऐनमा भएको नियम अनुसारनै उनिहरुले यस्तो माग गरीरहेका छन् । २०६३ सालमा क्यासिनोका वास्तविक लागानीकर्तालाई निकालेपछि खराब व्यवस्थापन र राज्यलाई करीब १३ करोड राजश्व नबुझाएका कारण २०७० साल बैशाख ५ गते बाट क्यासिनो बन्द भएको थियो । यससँगै अन्ना क्यासिनोमा कार्यरत ९ सय २२ जना कर्मचारीको रोजीरोटी गुमेको थियो ।
क्यासिनोमा विवाद सुरु भएसँगै २०६८ सालमा नेपाल सरकारले समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयलाइ लत्याएर उनिहरुको तलब सुविधा तथा सञ्जकोष समेत नदिई काम निकालियो ।
यही कराण परिवारमा आर्थिक समस्या देखि आएको समस्याको कारण ७ जनाले त आत्महत्या नै गरीसकेका छन् ।
यो बिचमा उनिहरु पटक पटक श्रम अदालत पुगे, सर्वोच्च पुगे, पर्यटन मन्त्रालय पुगे, विभाग पुगे तर कतैबाट पनि उनिहरुको माग सुनुवाई भएन । उल्टो केही समय अघिमात्र अन्नपुर्ण होटललाई नै पुनः एट्लान्टिक रिक्रिएशन सेन्टर नामको क्यासिनो खोल्ने अनुमती दिएको छ र अहिले सञ्चालनमा छ ।
एउटै होटलमा नयाँ क्यासिनो खोल्दा पहिलेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने नियम छ तर यहाँ केही व्यक्तिहरुलाई मात्रै रोजगार दिए र सबै आन्दोलन दबाउन खोजेको उनिहरुको आरोप छ ।
तर अन्नपुर्ण होटलसँगको यो मुद्धामा न सरकारका कुनै मन्त्रीहरुले एक्शन लिन सक्छन् न अदालतका आदेश र फैसलाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
गलत गर्ने मेडिकलले दियो क्षतिपुर्ती, मेनपावरद्वारा पनि छिटै क्षतिपुर्ती दिने प्रतिवद्धता
काठमाडौँ । गत कार्यक्रममा हामीले कतार गएर २२ दिनमै दुवै मृर्गौला फेल भएर फर्किएका नारायण गिरीको बिषय उठान गरेका थियौँ ।
मेडिकलले फिट भनेर दिएको अनफिट डकुमेन्ट्रले आफु मर्कामा परेको र पर्फेक्ट मेनपावरले समेत क्षतिपुर्ती नदिएको गुनासो पिडित को थियो हामीले यो बिषय प्रसारण गरेपछि पिडित लाइ सिरप मेडिकलले बोलाएर सहयोग स्वरूप भन्दै ५० हजार दिएको छ ।
चिकित्सकहरुले मेडिकल गर्दा नै थाहा हुने बताईरहदा मेडिकल ले भने आफुहरुको गल्ती नभएको भन्दै गल्ती देखिए सजाय भोग्न तयार रहेको भन्दै पिडितलाइ ५० हजार सहयोग दिएको बताएको छ ।
यता मेनपावरले पनि छिटै क्षतीपुर्ती दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पिडितकी श्रीमती शान्त गिरीले भने क्षतिपुर्ति संगै कारबाही पनि हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
मेडिकलले मेनपावर र मेनपावरले मेडिकल लाई दोष लागाउने क्रले चलेपछी हामीले मेडिकल र मेनपावरलाई संगै राखेर कुरा गरेका थियौ ।
मेनपावरले मेडिकल फेल भएको रिपोर्ट आफुहरुलाइ नदिएको मेडिकलको आरोप छ । पर्फेक्ट मेनपावरका सञ्चालक आइतबार नेपाल आएपछि पिडित ले मेनपावरबाट पाउने क्षतीपुर्ती पनि पाउने भएका छन् ।
भिडियो हेर्नुहोस सिधाकुराजनतासंग
Posted in भिडियो, विचार, समाचार, सामाज
Prev‘भाडा तिरीसकेपछि मुढामा बसाएर यात्रा गराउँन पाइन्छ ? बस छुट्ने समय फिक्स हुनु पर्दैन ?’ (भिडियो सहित)
Nextमध्यरातमा त्रिभुवन विमानस्थलमा १३३ जना यात्रु बोकेर काठमाडौँबाट मलेसियाको क्वालालम्पुरतर्फ उड्न लागेको बिमान दुर्घटना, जहाज धावनमार्गबाट चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुग्यो…
भाइरल अर्जुन बिकको कोठामा पुग्दा बि’जोग अवस्था, श्री,मतीको लागि जेलसम्म पुगे भन्दै भक्कानिए (भिडियो हेर्नुहोस)
ब्रेकिङ न्युज– घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि गोली प्रहार, अवस्था गम्भीर